InternetDownloadManager 6.15 Final version – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Thu, Jan 31st, 2013 Uncategorized / ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲများ | By JojOe (KOThu) InternetDownloadManager 6.15 Final version
မနေ့ကမှ update ပေးတာပါ….user တွေအတွက်နောက်ကျန်ခဲ့အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်…ဒီမှာတော့ Setup exe လေးပဲပေးတော့မယ်နော် Procedure ကတော့ဒီကနည်းအတိုင်းပဲကြည့်လုပ်လိုက်တော့နော်တူတူပဲဆိုတော့……
IDM 6.15 ယူရန်…..
IDM Full version ဖြစ်အောင်သွင်းနည်း……
ဒေါင်းလို့ရလာတာလေး ကိုဖြည်လိုက်ပါ…..အထဲက idm6.15.exe ကို run ပြီးသွင်းလိုက်ပါ….နောက်ဆုံး Finish ဆိုသွင်းလို့ပြီးပါပြီ…..ကဲသုံးဖို့သွားမဖွင့်နဲ့ဦးနော်..သူဟာသူပွင့်ပြီး….run နေရင်ပိတ်…. task ထဲကနေexist ပြန်လုပ်လိုက်……..ဒေါင်းထားတဲ့
patch ဆိုတာလေးကို Copy လိုက်…..ပြီးရင် my computer>>C: အောက်က Program files>>Internet Download manager..ဆိုတဲ့ဖိုင်ထဲထည့် patch လေးကို run လိုက်..အဲမှ patch button လေးနှိပ်လိုက်ပေတော့…..အိုကေပီဘယ်တော့မှ register မလုပ်ခိုင်းတော့ဘူး ပိုက်ပိုက်ပေးဝယ်ရမဲ့ Full Version ဖြစ်သွားပြီ……မယုံရင် IDM ကိုဖွင့် registartion မှာ Order online, Registration မှာအရောင်မှိန်နေပီ…..
သူ့ Features လေးတွေလေ့လာချင်ရင် ဒီကိုသွားးးပါ…..
patch ဖိုင်ဒေါင်းရန် Antivirus ပိတ်ဒေါင်းပါ…..
4 comments on “InternetDownloadManager 6.15 Final version”	Moon Lay on February 5, 2013 at 11:27 am said:
အကို antivirus ကိုဖွင်းပီးဒေါင်းမိတယ်။ ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူး။ ကြောက်လို့ အခုထိဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ အကို့ဆီက ဘာလိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေရတော့မှ ဆက်လုပ်တော့မယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကို့ကို ပြန်ဖြေပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေူးဇူးတင်လျှက်ပါ။
Reply ↓	akio on March 7, 2013 at 8:12 am said:
Reply ↓	Nay Myo on March 9, 2013 at 2:10 am said:
Reply ↓	Hein Htet : on April 16, 2013 at 5:51 pm said:
Ok my bro. and thanksalot
tharrnge on Y220T recovery ခေါ်နည်းနဲ့ firmware တင်နည်းCho Chin on RedLink မှ WiMax အင်တာနက်လိုင်းများကိုအခမဲ့တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မည်zinbo on Huawei U8860 အတွက် Internet Speed မြန်တဲ့ Custom 4.1.2 ROM လေးပါkukushimaru123@gmail.com on Star GirlBoAungDin on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2) Android Development